​Guddiga doorashooyinka KMG Puntland oo gudoomiye doortay
GAROWE- Guddiga KMG ah doorashooyinka Puntland oo yeeshay kulankii ugu horaysay ayaa maanta doortay gudoomiye iyadoo xilkaasi loo dhiibay Axmed Maxamed Cali oo horay usoo noqday agaasimaha Puntland TV.
Gudoomiye ku-xigeen ayaa sidoo kale loo doortay Maxamud Soofe.
Guddigan oo sagaal xubnood ka kooban ayaa shalay lagu ansixiyey kalfadhiga aan caadiga ahayn oo u socda Barlamanka Puntland, waxaan maanta lagu dhaariyay xarunta madaxtooyada iyadoo uu goob joog ahaa Madaxweyne ku-xigeenka iyo Afhayeenka Barlamanka.
Xubnahan ayaa bishii labaad ee sannadkan, waxaa soo kala magacaabay madaxweyne Gaas iyo Axmed Cali Xaashi, waxaana la filayaa inay bilaabaan shaqooyinkooda, maadama ay mareen nidaamka dastuuriga ahaa.
Axmed Maxamed Cali, ayaa lagu doortay kulan ay ku yeesheen xarunta cilmi baarista Puntland ee PDRC.
Weli kama uusan hadlin qaabka uu arko xilkan loo doortay.
​Guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo la ansixiyay
Puntland 24.04.2016. 14:44
GAROWE- Barlamanka Puntland oo magalada Garowe ku leh kalfadhi aan caadi ahayn ayaa maanta meelmariyay guddiga KMG ah doorashooyinka Puntland, kuwaasi oo ka kooban sagaal xubnood.
Fadhiga Barlamanka oo ay joogeen 52 mudane ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay xu ...
​Guddoomiyihii Guddiga doorashooyinka Puntland oo is-casilay [Akhriso]
Puntland 21.11.2016. 14:07
​Howlaha guddiga KMG doorashooyinka Puntland oo Garowe lagu daah furay
Puntland 11.05.2016. 12:57
​Puntland: Nidaamka axsaabta badan oo laga shiray
Puntland 08.03.2016. 23:50
​Puntland: guddiga doorashada oo la magacaabey
Puntland 15.02.2016. 17:28
Puntland oo ku dhawaaqday in Axsaab siyaasadeed la furan karo [Daawo]
Puntland 25.03.2017. 14:22
Guddiga xalinta khilaafadka doorashada Somalia oo tirtirey natiijada kuraas lagu tartamay [AKHRI]
Soomaliya 14.12.2016. 13:20
​Khilaaf ka dhex taagan Guddiga KMG ah doorashooyinka Puntland iyo Xoghayahooda
Puntland 05.10.2016. 19:04